MB 2015 Febraayo, Kaniisadda Caalamiga ah ee God Switzerland (WKG)
Waxaan u arkaa inay tahay wax lagu qoslo markay dadku sharraxaan: "Haddii aanan arki karin, ma rumeysan doono." Waxaan badanaa maqlaa taas oo leh marka dadku ka shakiyaan inuu Ilaahay jiro ama uu dadka oo dhan ku daro nimcadiisa iyo naxariistiisa. Si aanan u horseedin dembi, waxaan tilmaamayaa inaanan arkin magnetism ama koronto, laakiin waxaan ka garan karnaa saameyntooda inay jiraan. Isku mid ayaa la mid ah dabaysha, culeyska, codka iyo xitaa fikirka. Sidan ayaan u aragnaa waxa loo yaqaan "aqoonta aan aqoonta lahayn". Waxaan jecelahay inaan tilmaamo aqoon sida "aragtida aan la arki karin."
Kaliya waxaan ku tiirsannahay aragtidayada, sanado badan waxaan qiyaasi karnaa waxa ku jira samada. Iyada oo taageero laga helayo telescopes (sida Qalabka Hubble) waxaan inbadan ka naqaanaa maanta. Waxa mar uun "aan la arki karin" annaga hadda waa la arki karaa. Laakiin wax kasta oo jira ma muuqdaan. Arrin mugdi ah tusaale ahaan T. ma soo saaro iftiin ama kuleyl. Waa mid aan la arki karin telifoonkeenna. Si kastaba ha noqotee, saynisyahannadu waxay ogyihiin in arrin mugdi ah ay jirto maxaa yeelay waxay ogaadeen saameyntoodii xagga dhireed. Quaks waa qulqulatooyin yar yar oo loo maleynaayo oo sameeya protons iyo unugyada unugyada xudunta atomka. Gluons-ka, qulqulaha ayaa waliba sameeya astaamo kale oo qalaad, sida mesons. In kasta oo astaamahaas atom aan waligood la arkin, saynisyahannadu waxay muujiyeen waxyeeladooda.
Ma jiro microscope ama telescope lagu arki karo Ilaah, sida Qorniinku ku sheegay Yooxanaa 1,18 uu inoo sheegayaa: Ilaah lama arki karo: - Ma jiro nin weligiis Ilaah arkay. Laakiin wiilkiisa kaliya, oo si fiican u yaqaan aabaha, ayaa ina tusay kan Ilaah yahay. Qalabka jir ahaaneed, ma jiro hab “lagu caddeeyo” jiritaanka Ilaah. Laakiin waxaan aaminsanahay inuu Ilaah jiro maxaa yeelay waxaynu soo marnay saamaynta jacaylkiisa shuruud la’aanta ah, iyo jacaylka oo dhan. Jacaylkani, dabcan, waa shakhsiyan, daciifnimo iyo la taaban karo oo lagu muujiyey Ciise Masiix. Ciise waxaan ku aragnaa wixii ay rasuuliyadiisu ku soo gabagabeeyeen: Ilaah waa jacayl. Jacaylka, oo aan laftiisa lagu arki karin, waa dabeecadda Eebbe, dhiirrigelintiisa iyo ujeeddadiisa. Sida TF Torrance dhigayso:
«Soo bixitaan joogto ah oo joogto ah oo jacaylka Ilaah ah, oo aan lahayn sabab kale oo ficilkeeda ah oo aan ahayn jacaylka, kaas oo ah Ilaah, sidaa darteed ayaa loo daadshay iyada oo aan loo eegin qofka iyo iyada oo aan loo eegin falcelintooda» (Fiqiga Masiixiga iyo Dhaqanka Sayniska, bogga 84).
Ilaah wuu jecel yahay sababtoo ah cidda uu yahay, ma aha sababta aan u nahay iyo waxaan ku kacno. Oo jacaylkan ayaa inagaga muujiyey nimcada Ilaah.
In kasta oo aan si buuxda u sharixi karin waxa aan la arki karin, sida jacaylka ama nimcada, haddana waxaan ognahay inay jirto maxaa yeelay waxa aan aragno ayaa qayb ahaan jooga. Xusuusin, waxaan u adeegsadaa erayga "qayb ahaan". Ma rabno inaan ku dhicin dabinka riyada oo waxa muuqda ee sharxaya waxa aan muuqan. TF Torrance, oo bartay cilmiga fiqiga iyo sayniska, waxay ogaatay in waxa ka soo horjeedaa ay run yihiin; waxyaabaha aan muuqan ayaa sharxaya waxa muuqda. Si tan loo sharraxo, wuxuu adeegsadaa masaalkii shaqaalaha beerta canabka ah (Matayos 20,1: 16) meeshaasoo milkiilaha canabka ah uu kireysto shaqaalaha maalintii oo dhan inay ka shaqeeyaan beeraha. Dhamaadka maalinta, shaqaale kasta wuxuu helayaa mushahar isku mid ah, xitaa haddii qaar ay si adag u shaqeeyeen maalintii oo dhan kuwa kalena dhowr saacadood uun shaqeeyaan. Shaqaalaha badankood, tani waxay umuuqataa cadaalad darro. Sidee qof saacad keliya shaqeeya saacad u heli karaa mushahar la mid ah kan shaqeeya maalintii oo dhan?
Torrance waxay farta ku fiiqday in aasaasiyiinta iyo fikradaha tabaruca ahi ay seegi doonaan barta masaakiinta Ciise, oo aan ku salaysnayn mushaharka iyo caddaaladda, laakiin lagu helayo shuruud la’aan Ilaah, deeqsinimo iyo naxariis badan. Nimcadan kuma salaysna mudada aan shaqeeynay, mudada aan aaminsanahay, inta aan baranay, ama sidaan u hogaansanay. Nimcada Ilaah waxay kuxirantahay qofkastoo Eebbe yahay. Tusaalahan, Ciise wuxuu ka dhigayaa "mid aan muuqan" dabeecadda nimcadiisa "la arki karo", oo, annaga naga duwan, wax arka oo qabanaya wax. Boqortooyada Ilaahay maahan inta aan kasbano, laakiin waxay ku saabsan tahay deeqsinimada Eebbe.
Masaalka Ciise wuxuu inoo sheegayaa in Eebbe ku deeqo nimcadiisa cajiibka ah dhamaan dadka. In kasta oo dhammaantood la siiyo hadiyad isku mid ah, qaar ayaa isla markaaba doorta inay ku noolaadaan xaqiiqadan nimcada leh, iyagoo siinaya fursad ay ugu raaxaystaan ​​muddo ka dheer kuwa aan weli dooran. Hadiyadda nimcada ayaa leh qof walba. Waxa ay shakhsiyaadku ku dhaqmaan waa mid aad u kala duwan. Markii aan ku nool nahay nimcada Ilaah, waxa aan la arki karin ayaa noqotay wax muuqda.
Ku soo xadgudubka nimcada Ilaah ayaa ka dhigaysa mid aan yaraynin. Ilaah nafteenna ayuu ina siiyay si aan u garanno oo u jeclaano oo aan u helno dembidhaafkeenna xiriir aan isaga la yeelno sidii aabbe, wiil iyo Ruuxa Quduuska ah. Waxaan ku nool nahay iimaan ee ma ahan eegid. Waxaan ku soo aragnay doonistiisa nolosheenna, fekerkeenna iyo ficilkeenna. Waxaan ognahay inuu Ilaah jacayl yahay maxaa yeelay waxaynu ognahay inuu isagu ku jiro Ciise Masiix kan “noo muujiyay”. Sida John 1,18 (Tarjumaadda New Geneva) ayaa loo qoray:
«Qofna weligiis ma arkin Ilaah. Wiilka keliya ayaa noo muujiyay, kan isagaa ah Ilaaha fadhiista aabaha dhinaciisa. Waxaan dareemaynaa awooda nimcada Eebbe sida aan u aragno ujeedkiisa ah in la cafiyo oo la jeclaado - inna siiyo hadiyadda cajiibka ah ee nimcadiisa. Sidii Bawlos u yeelay Filiboy 2,13 (Tarjumaadda New Geneva) waxay cadeyneysaa: "Eebbe laftiisu wuu ku dhex shaqeynayaa adiga oo keliya ma aha mid kuu diyaarinaya, laakiin wuxuu sidoo kale kuu oggolaanayaa inaad sameyso waxa uu jecel yahay."
Ku noolaanshaha nimcadiisa